Balearic ကျွန်းများသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ဒီဇယ်ကားများတားမြစ်ခြင်းဖြင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုခံရပ်ချင်သည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
Balearic ကျွန်းများသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ဒီဇယ်ကားများတားမြစ်ခြင်းဖြင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုခံရပ်ချင်သည်
မော်နီကာဆန် | | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်ရည်မှန်းချက်ကြီးသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းမည်သူမျှမတားဆီးလျှင်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိပုံရသည် - ကျွန်းစုအစိုးရသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ဒီဇယ်ကားများကိုပိတ်ပင်ထားနိုင်သည် မှတ်ပုံတင်အသစ်များနှင့်ငှားရမ်းထားသောကားများနှင့်ကျွန်းများသို့၎င်းတို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ရောက်ရှိလာသော visitors ည့်သည်များအပေါ်သက်ရောက်မည့်ဥပဒေမူကြမ်းအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
အရာအားလုံးနှင့်အတူ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင်မစ်ရှင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်Alcúdia (Mallorca) တွင်တည်ရှိသော Murterar သည်ကျွန်းစု၏အပူစွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည်တစ်နှစ်လျှင်အချိန်မတန်မီသေဆုံးမှု ၅၄ ခုဖြစ်ပွားစေသည်ဟုသုံးသပ်ခြင်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ Mallorca သတင်းစာ.
မကြာသေးမီနှစ်များအထူးသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်းများရှိမော်တော်ယာဉ်များသည် Crescendo တွင်ရှိခဲ့သည်။ အားလပ်ရက်အများများလိုသောလူများဖြန့်ဝေရုံသာမကတစ်နှစ်ပတ်လုံးနေထိုင်သူများလေကိုညစ်ညမ်းစေသောဓာတ်ငွေ့များကိုလည်းထုတ်လွှတ်သည်။ အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားလာစေရန်တားဆီးနိုင်ရန်အဘယ်အရာပြုလုပ်မည်နည်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်လှန်ပြီးဒီဇယ်စက်ဖြင့်မောင်းနှင်သောကားများကိုတားမြစ်သည်.
ဒါပေမယ့်လည်း, Es Murterar စက်ရုံပိတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် နည်းနည်းချင်းစီ - ၂၀၂၀ တွင်အုပ်စု ၁ နှင့် ၂ နှင့် ၂၀၃၀ တွင်အုပ်စု ၃ နှင့် ၄ ။ သို့သော်ယင်းသည်အားလုံးမဟုတ်ပါ။ အများပြည်သူဆိုင်ရာအလင်းရောင်နှင့်ကားရပ်နားရန်နေရာများနှင့်ဂိုဒေါင်အသစ်များတွင်ဆိုလာပြားများကိုတပ်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ Formentera ကျွန်းတွင်နွေရာသီတွင်ရောက်ရှိလာသောကားအရေအတွက်ကိုလည်းကန့်သတ်နိုင်သည်။ သြဂုတ်လတွင်တစ်ရက်လျှင်ယာဉ်အစီး ၅၀,၈၇၂ စီးပျံ့နှံ့သွားသောကြောင့်၎င်းသည်သေးငယ်သည့်ကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြနာကနောက်ဆုံးစကားလုံးဖြစ်တဲ့မက်ဒရစ်ကိုဗဟိုအစိုးရပဲ။ ပြီးတော့ Es Murterar ပိတ်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » Balearic ကျွန်းများသည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ဒီဇယ်ကားများတားမြစ်ခြင်းဖြင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုခံရပ်ချင်သည်
အီကွေဒေါသည် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ ရေခဲမြစ်၏ ၅၄% ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်